I-LG V30: ikhamera ephindwe kabini, ukungangeni manzi kunye nescreen esine-intshi ezi-6 | Iindaba zeGajethi
I-LG V30: ikhamera ephindwe kabini, ingena manzi kunye nescreen esine-intshi ezi-6
Iflegi entsha ye-LG yaseKorea ithiwe thaca njengentsapho. Le yirolo LG V30, iselfowuni enqwenela ukuba yenye yeeterminal zeenkwenkwezi kwintsalela yonyaka kwaye zeziphi izizathu ezingaswelekiyo, ubuncinci, zokufumana isipha esihle sesabelo sentengiso.
AbakwaLGG bathathe isigqibo sokuba i-IFA 2017 yayisisimo esifanelekileyo sokuqinisekisa uluntu ngokubanzi ukuba banemibono elungileyo xa kufikwa kumba weselfowuni. Kwaye oku kubonisiwe nge I-LG V30 yayo entsha, indawo enkulu ebekwe kwicandelo phablet kwaye oko kuyakwenza ukuba nzima kubaninzi abakhuphisana nabo.
1 Isikrini esikhulu kunye ne-chassis erhabaxa
2 Amandla e-LG V30 kunye nememori
3 Ifoto yekhamera ene-sensor ezimbini kunye nokukhanya okuphezulu
4 Imigqomo kunye nesandi
5 Inkqubo yokusebenza, unxibelelwano kunye nokufumaneka
Isikrini esikhulu kunye ne-chassis erhabaxa
Kwabaqalayo, le LG V30 ine-a Isikrini esine-intshi ezi-6 esine-QHD resolution (Iipikseli ezingama-2.880 x 1.440). Iphaneli esetyenzisiweyo yeyodidi lwe-OLED kwaye njengoko sele iyinto eqhubekayo kwicandelo lonke, isikrini sayo sihlala ngaphambili. Ngaphezu koko, sinokukuxelela ukuba iyakwazi nokungena ngaphakathi kwi-chassis egoso. Ngale ndlela isikrini sibizwa ngokuba yi-'OLED Fullvision '.
Kodwa siyaqhubeka nokumangalisa ngakumbi kule LG V30. Kwaye siyenza nge-chassis yayo eqinisiweyo. Ukongeza ekubeni noyilo olunomtsalane olungena ngamehlo, ikwanaso nesatifikethi se-IP68. Ithetha ntoni le nto? Kulungile yintoni I-LG V30 iyamelana nothuli kunye namanzi. Kwimeko yokugqibela, umsebenzisi uya kuba nakho ukuntywilisela esi sixhobo phantsi kwamanzi ukuya kuthi ga kwi-1,5 yeemitha kwimizuzu engama-30. Kwimeko yokudlula kuwo omabini la manani, ukungasebenzi kakuhle kwezixhobo kuyaqinisekiswa.
Amandla e-LG V30 kunye nememori
Ngeli xesha, ngaphakathi kwikhompyuter siya kuba nenye yeeprosesa zamva nje ezivela kwiQualcomm eyaziwayo. Sithetha nge-chip efanayo ebandakanya izixhobo ezinje ngeSamsung Galaxy S8 okanye i-OnePlus 5. Oko kukuthi, yiyo Iprosesa yeQualcomm Snapdragon 835 8-core kwaye ihamba ne-4 GB ye-RAM -Mhlawumbi kule meko bawele kancinci ngokujonga ukuba i-Galaxy Note 8 ixhobisa i-6 GB.
Ngelixa kwindawo yokugcina izinto ziyatshintsha. Kwaye kunjalo Sinokukhetha phakathi kwemodeli eyi-64 okanye eyi-128 GB. Ewe kunjalo, kuzo zombini iimeko amakhadi ememori akwifomathi ye-MicroSD ukuya kuthi ga, iliso, i-2 TB yamkelwe.
Ifoto yekhamera ene-sensor ezimbini kunye nokukhanya okuphezulu
Siqhubekela kwenye yeempawu zayo zeenkwenkwezi. Ngokuchanekileyo, ikhamera yayo yangemva. Into yokuqala esiza kukuxelela yona kukuba ngasemva kwe-chassis siza kuba nomfundi ofunda ngeminwe ukuze sikwazi ukuvula i-terminal ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. Kwaye kule yongezwa ikhamera nge Inzwa ezimbini ezinesisombululo se-16 kunye ne-13 megapixels. Inzwa yesibini ikwikona ebanzi. Ukuqaqamba kwenzwa yenye yezona ziphantsi i-1.6 f, ke iifoto ezintle ziya kufunyanwa nokuba isibane sendawo asihambi. Ukongeza, kwaye kunokuba kungenjalo kungenjalo, unokwenza i-bokeh eyaziwayo okanye isiphumo esibi.
Ngaphambili uya kuba nekhamera enekona ebanzi kwaye ejoliswe kwiinkomfa zevidiyo okanye kwiiselfie. Kule meko sithetha nge isivamvo esine-5 megapixel resolution.
Imigqomo kunye nesandi
Siyaqhubeka nezinto ezinomdla ngakumbi kule LG V30. Kwaye siyenza nebhetri yakho. Oku kulingana nale esele siyazi kwi-Samsung Galaxy Qaphela 8. Kwaye uya kuba nayo ibhetri eyi-3.300 milliamp ekufuneka ikunike ukuzimela imini yonke. Yintoni ongafiki kuyo? Uxolo lwengqondo kuba iTekhnoloji ekhawulezayo yokutshaja i-3.0 nayo ifakiwe. Ke kwimizuzu embalwa uya kufezekisa inqanaba lentlawulo eliza kukuvumela ukuba usebenze kamnandi kwiiyure ezimbalwa.
Icandelo lesandi alibaleki kule LG V30 nokuba. Kwaye kunjalo I-Bang & Olufsen inoxanduva lokubandakanya itekhnoloji kunye nee-headphone ukutshatisa: yi-B & O Play. Itekhnoloji ye-Hi-Fi Quad DAC ikwabandakanyiwe kwaye ixhasa iMQA (Umgangatho weNkosi uqinisekisiweevumela ukuhambisa umculo kwinkcazo ephezulu.
Inkqubo yokusebenza, unxibelelwano kunye nokufumaneka
I-Android yinkqubo yokusebenza ebandakanya i-LG kwi-LG V30 yayo. Ikwenza njalo ngohlobo lwamva nje kwintengiso: Android 7.1.2 Nougat, ukongeza kulungelelwaniso lwayo lwesiko lwe-UX 6.0+ olulindelwe ngophuculo. Okwangoku, kwicandelo lonxibelelwano sifumanisa ukuba unokunxibelelana neenethiwekhi zangoku ze-4G; Uya kuba nesantya esiphezulu se-WiFi, i-NFC kunye nokusetyenziswa okuphantsi kweBluetooth. Ndiyazi nam ibandakanya izibuko lohlobo C lwe-USB kunye nokukwazi ukusebenzisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo.
Inkampani ayihluzanga amaxabiso eza kuqala ngawo le LG V30. Khumbula ukuba uya kuba neenguqulelo ezimbini ezikhoyo (i-64 okanye i-128 GB) kwaye iya kuba kwimibala eyahlukeneyo: emfusa, luhlaza okwesibhakabhaka, isilivere okanye mnyama. Iya kuthengiswa ngoSeptemba 21 kwaye iYurophu yenye yeemarike ethathelwa ingqalelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG V30: ikhamera ephindwe kabini, ingena manzi kunye nescreen esine-intshi ezi-6
I-Acer yazisa ngeeprojektha ezimbini zekhaya kunye nokusetyenziswa kobungcali